Nelson, Victoria, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Patrick
Isendaweni emaphakathi phakathi kwe-Adelaide neMelbourne. Eduze kweMount Gambier, Portland, Coonawarra, Naracoorte Caves. Izinyathelo zokuhlanza ezinconywe i-Airbnb kanye noHulumeni Wesifunda SaseVictoria ziyasetshenziswa. Hlala eCedar Cottage Nelson futhi ujabulele okuhle kakhulu kwe-S.W. I-Victoria kanye ne-S.A's Limestone Coast. Ifakwe ngokugcwele, ihlanzekile futhi inethezekile. Inala yokupaka izimoto nama-trailer esikebhe. Umpheme omkhulu ubheke ingadi engu-2 acre yangasese nenokuthula enezilwane eziningi zasendle.
Lokhu kuqashwa kwamaholide kutholakala endaweni enhle elokishini elisogwini laseNelson. Ijethi, irempu yesikebhe, ibhishi lokubhukuda nendawo yepikiniki zitholakala eduze kwase-Simsons Landing. Indawo ikude nemisindo yomgwaqo omkhulu kodwa ayikude nezitolo nezinsiza. Izinyoni nezilwane zasendle kugcwele. Ekuseni nakusihlwa uzozwa ukuhlabelela kwezinyoni okumangalisayo kakhulu. Iba ne-barbecue emphemeni wangaphandle, noma vele uphumule futhi ubone inala yezinyoni nezilwane zomdabu. Thatha uhambo lomfula usuka eNelson uye ePrincess Margaret Rose Caves. Isifunda sewayini sase-Coonawarra siqhele ngehora elilodwa ngemoto.
4.90(89 okushiwo abanye)
4.90 · 89 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala evulekile, ethokomele futhi efudumele ebusika futhi epholile futhi enethezekile ehlobo, i-Cedar Cottage ihlinzeka ngesifudumezi sokhuni nesipholile se-R/C. Kunezimpumputhe zangaphandle zezinsuku ezishisa kakhulu.
Inqwaba yezindawo zokupaka kanye negumbi lokuhambisa i-trailer yesikebhe.
Bhuka indawo yakho yokubalekela e-Cedar Cottage futhi ujabulele ubuhle. Uzothola ukuthi leli yiphakethe elithulile nelinokuthula lika-Nelson elilungele izimpelaviki noma ukuhlala isikhathi eside.
Impahla izimele ngokwayo. Umsingathi angathintwa ngocingo, noma nge-imeyili noma nini lapho udinga ulwazi olwengeziwe mayelana nokuhlala kwakho.
UPatrick Ungumbungazi ovelele